Mareykanka Oo Liiska Argagixiso Ku Daray Cabdiqaadir Muumin Oo Ah Hogaamiye Urur Xagjir | Berberatoday.com
Mareykanka Oo Liiska Argagixiso Ku Daray Cabdiqaadir Muumin Oo Ah Hogaamiye Urur Xagjir
September 1, 2016 - Written by Berbera Today
Washington(Berberatoday.com)-Waaxda arrimaha dibedda Mareykanka ayaa Cabdulqaadir Muumin ku dartay liiska argagixisada sida gaarka ah loo callaamadeeyey, ee amarka madaxweyne ee tirsigiisu yahay 13224, kaasi oo cunaqabateyn kusoo roga shaqsiyaadka iyo kooxaha la go’aamiyey inay halis ku yihiin Mareykanka.
Cabdulqaadir Muumin ayaa madax ka ah koox ku xiran Daacish oo Soomaaliya ka jirta.
Cabdulqaadir Muumin oo horey shaqsiyaadka argagixisada ugu qori jiray ilsmarkaana u ahaa afhayeenka Al-Shabaab ayaa isaga iyo 20 dagaalyahan oo kale waxay bishii October ee 2015 ku biireen Daacish, ayaga oo saldhig ka sameystay meelo ka mid ah Puntland.
Wixii markaa ka dambeeyey, ayaa sida ay sheegtay waaxda arrimaha dibedda Mareykanka, Cabdulqaadir Muumin waxa uu ballaariyey unugiisa argagixiso isaga oo afduubay wiilal da’yar oo 10 illaa 15 sano jiro ah, kuna qasbay inay ciidamo noqdaan.
Go’aanka cusub ee Mareykanka kasoo baxay ayaa waxa uu farayaa dhammaan shaqsiyaadka iyo hay’adaha Mareykanka inaysan wax xiriir ah la sameyn karin Cabdulqaadir Muumin.
Go’aanka maanta kasoo baxay Mareykanka ayaa sidoo kale ogeysiinaya dadweynaha Mareykanka iyo beesha caalamka in Cabdulqaadir Muumin uu si firfircoon ugu lug lee yahay ficillo argagixiso.